Tilmaamaha ku saabsan Tijaabada A / B ee Tijaabada Google Play | Martech Zone
Tilmaamaha Tijaabada A / B ee Tijaabooyinka Google Play
Isniin, Oktoobar 14, 2019 Isniin, Oktoobar 14, 2019 David Bell
Soosaarayaasha barnaamijka Android, Tijaabooyinka Google Play waxay bixin karaan aragtiyo qiimo leh waxayna kaa caawin karaan kordhinta rakibida. Ku shaqaynta tijaabada A / B ee si fiican loo qaabeeyey oo si fiican loo qorsheeyey waxay kala duwanaan kartaa isticmaalaha rakibinaya abkaaga ama tartame. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira marar badan oo imtixaanada si khaldan loo maamulay. Khaladaadkan ayaa ka shaqeyn kara barnaamijka isla markaana dhaawici kara waxqabadkiisa.
Halkan waxaa ku yaal hage loo adeegsanayo Tijaabooyinka Google Play waayo, A / B imtixaanka.
Dejinta Tijaabo Google Play ah
Waxaad ka heli kartaa qunsulka tijaabada gudaha dashboorka barnaamijka Google Play Developer Console. Tag Joogitaanka Bakhaarka dhinaca bidix ee shaashadda oo xulo Tijaabooyinka Liiska Bakhaarka. Halkaas, waxaad ka dooran kartaa "Tijaabo Cusub" oo aad dejin kartaa baaritaankaaga.
Waxaa jira laba nooc oo tijaabooyin ah oo aad ordi karto: Tijaabinta Sawirka Sawirka iyo Tijaabada deegaanka. Tijaabada ah Tilmaamaha Sawirada ayaa kaliya ku shaqeyn doonta imtixaanada gobolada luuqada aad u dooratay inaad ubaahatid. Tijaabada deegaanka, dhinaca kale, waxay ku socon doontaa tijaabadaada gobol kasta oo barnaamijkaaga laga heli karo.
Midda hore waxay kuu oggolaaneysaa inaad tijaabiso walxaha hal-abuurka ah sida astaamaha iyo shaashadaha, halka kan dambe uu sidoo kale kuu oggolaanayo inaad tijaabiso sharraxaaddaada gaaban iyo kuwa dheer.
Markaad dooranayso noocyada imtixaankaaga, maskaxda ku hay in noocyo badan oo aad tijaabiso, ay sii dheeraan karto si loo helo natiijooyin waxqabad leh. Noocyo fara badan ayaa sababi kara tijaabooyinka oo u baahan waqti dheeri ah iyo taraafikada si loo dhiso kalsooni isku xir ah oo go'aamisa saameynta beddelka suurtagalka ah.
Fahamka Natiijooyinka Tijaabada
Markaad tijaabooyinka wado, waxaad ku cabbiri kartaa natiijooyinka iyadoo lagu saleynayo Rakibayaasha Waqtiga Koowaad ama Rakibayaasha Haysanaya (Hal Maalin). Rakibayaasha Waqtiga Koowaad waa wadarta beddelaadaha kuxiran noocyada, iyadoo Rakibayaasha haynta ah ay yihiin kuwa adeegsada barnaamijka maalinta koowaad kadib.
Konsolku wuxuu kaloo bixiyaa macluumaad ku saabsan Xilligan (isticmaaleyaasha barnaamijka ku rakibmay) iyo Qiyaasta (imisa rakib oo aad si hufan u heli laheyd haddii noocku helo 100% ee taraafikada inta lagu jiro muddada imtixaanka).
90% Kalsoonida Kalsoonida ayaa la sameeyaa ka dib imtixaanku muddo dheer ayuu soconayaa si loo helo aragtiyo ficil ah. Waxay muujineysaa bar casaan / cagaaran oo tilmaamaya sida beddelaadku aragti ahaan u hagaajinayo haddii kala duwanaanta si toos ah loo geeyo. Haddii baarku cagaaran yahay, waa isbeddel wanaagsan, casaan haddii uu diidmo yahay, iyo / ama labada midabba waxay la macno tahay inay u leexan karto dhinac kasta.
Hab-dhaqannada ugu Fiican ee Looga Fiirsado Imtixaanka A / B ee Google Play
Markaad tijaabineyso baaritaankaaga A / B, waxaad ubaahantahay inaad sugto ilaa inta kalsoonida lagaheli doono intaan la gaarin gabagabada. Rakibaadda nooc kasta way beddeli kartaa inta lagu jiro nidaamka baaritaanka, sidaas darteed iyada oo aan imtixaanka la qaadin muddo dheer oo ku filan si loo dhiso heer kalsooni, noocyada kala duwan ayaa laga yaabaa inay u shaqeeyaan si ka duwan marka si toos ah loo codsado.
Haddii aysan jirin taraafikada ku filan si loo dhiso kalsooni, waxaad isbarbar dhigi kartaa isbeddelada isbeddelka usbuuc ilaa toddobaad si aad u aragto haddii ay jiraan wax iswaafaq ah oo soo baxa.
Waxaad sidoo kale dooneysaa inaad raadiso saameynta ka dib geynta. Xitaa haddii Kalsoonida Kalsoonida ay sheegto in kala duwanaanshaha imtixaanku si ka wanaagsan u soo bandhigi lahaa, waxqabadkiisa dhabta ah weli wuu ka duwanaan karaa, gaar ahaan haddii ay jirto kala-cas / cagaar.
Ka dib markaad gayso noocyada imtixaanka, isha ku hay aragtida oo fiirso sida ay u saameeyeen. Saamaynta dhabta ah way ka duwanaan kartaa wixii la saadaaliyay.
Markaad go'aamiso waxa noocyadu si fiican u qabtaan, waxaad u baahan doontaa inaad xisaabiso oo aad cusbooneysiiso. Qeyb ka mid ah himilada baaritaanka A / B waa in la helo habab cusub oo lagu hormariyo. Ka dib barashada waxa shaqeynaya, waxaad abuuri kartaa noocyo cusub oo maskaxda ku haya natiijooyinka.
Tusaale ahaan, markaad la shaqeyneyso AVIS, Gummicube wuxuu soo maray wareegyo badan oo tijaabooyin A / B ah. Tani waxay gacan ka gaysatay go'aaminta waxyaabaha curinta iyo farriinta ugu habboon ee adeegsadayaasha la beddelay. Habkaasi wuxuu keenay 28% koror ku-beddelasho ka timid muuqaalka tijaabooyinka muuqaalka oo keliya.
Kala-baxa ayaa muhiim u ah koritaanka barnaamijkaaga. Waxay kaa caawineysaa inaad had iyo jeer soo jeediso qadka diimahaaga markaad dadaalkaagu sii kordhayo.
Imtixaanka A / B wuxuu noqon karaa hab fiican oo lagu hagaajiyo barnaamijkaaga iyo guud ahaan Kordhinta App Store. Markaad dejineyso baaritaankaaga, hubi inaad xadideyso tirada noocyada aad tijaabiso hal mar si loo dedejiyo natiijooyinka baaritaanka.
Inta lagu jiro baaritaanka, kormeer sida rakibiddaadu u saameynayaan iyo waxa Kalsoonidu u muujineyso. Inbadan oo isticmaaleyaasha ah ee arkaya barnaamijkaaga, ayaa sifiican fursadahaagu ugu jiraan sameysashada isbeddel joogto ah oo ansaxaya natiijooyinka.
Ugu dambeyntiina, waxaad u baahan doontaa inaad si joogto ah u socodsiiso. Soocelin kastaa waxay kaa caawin kartaa inaad barato waxa badala kuwa isticmaala sida ugu fiican, sidaa darteed waxaad sifiican u fahmi kartaa sida loo wanaajiyo barnaamijkaaga iyo cabirkaaga. Adoo qaadaya qaab habeysan oo loogu talagalay imtixaanka A / B, horumariyaha ayaa ka shaqeyn kara sii kordhinta barnaamijkooda.
Tags: Tijaabinta Sawirka Sawirkagoogle playGoogle Play Dejiye ConsolegummicubeTijaabada deegaankatijaabo cusubrakibay rakibayaashaJoogitaanka Bakhaarka
Dave Bell waa ganacsade isla markaana la aqoonsan yahay hormuudka dhinacyada madadaalada moobiilka iyo qaybinta waxyaabaha dhijitaalka ah. Dave waa Isuduwaha & Maamulaha Gummicube - oo ah hogaamiyaha caalamiga ah ee xogta, tikniyoolajiyadda, iyo adeegyada loogu talagalay Iskuduwaha App Store.
Ku Bilaabista Ololahaaga Suuqgeynta Fiidiyowga 3 Siyaabood
RFP360: Teknolojiyada soo ifbaxaya ee xanuunka looga saarayo RFPs